Warshad Tillandsia gudaha
Kuwa kale Dhirta
Cudurka Tillandsia waxaa matalaya dhirta firileyda ah. In ka badan 400 nooc iyo noocyo ayaa lagu sharaxay. Waxaa la aaminsan yahay in dalkooda uu yahay dhul-gooyooyinka iyo kulaylaha Mareykanka. Tillandsia waa warshad qurxoon oo qurux badan oo caan ku ah beeralayda ubaxa.
Waxaa ka mid ah wakiilada cirfiidka, waxaa jira cilado. Waxay leeyihiin caleemo caano ah oo aan u baahnayn ciid, inta badan waxaa lagu iibiyaa jilbaha geed ama dhagax. Wixii sii kordhaya ee dheriga ah, noocyada dabiiciga ah ayaa ku haboon. Waxay leeyihiin caleemo cagaaran ama caleemo leh. Maaddaama muuqaalka muuqaalka iyo qurxinta, Tillandsia waxaa loo isticmaalaa qurxinta dhalooyinka, terrariums iyo meelaha gudaha. Warshadda qaangaarka ah waxay ka kooban tahay 20 ilaa 60 cm dherer. Noloshiisu waa 3-5 sano, dhirta ayaa dhimata kadib xilliga ubaxa.
Nalalka. Nadaafada Tillandsia jecel nalalka wanaagsan. Waxaa lagula talinayaa in ay koraan daaqadaha ee dhanka galbeedka iyo koonfurta. Ka reeban waa noocyada Tillandsia Blue, oo si wanaagsan u koraya daaqadaha waqooyiga.
Nidaamka heerkulka. Xilliga jiilaalka, warshadu waxay u baahan tahay heerkul ah 18 illaa 210C, habeenkii wax yar ka yar - 16-180C. Xilliga xagaaga, heerkulka ugu fiican ee Tillandsia waa 22-290C, habeenkii 15-160C.
Goobta. Waxaad dhigi kartaa warshad Tillandsia ah ee daaqadaha iyo qaybta derbiga, samaynta saldhigyada, rackets, driftwood, grates iyo stamps nadiifinta. Wixii beerista noocyada epiphytic ee Tillandsia, xayawaan alwaax ama driftwood, dhagxaan khaas ah oo ka kooban jilif ah dhoobo cagaarka ama geedaha cagaaran ayaa loo isticmaalaa. Warshadku waxay kuxirantahay saldhigga godka iyada oo la isticmaalayo nacnac. Mararka qaar isticmaal koolka biyaha adag. Ku dhaji Tillandsiyu si aan waxba looga hortagin koritaanka caadiga ah ee xididdada. Noocyada qaarkood waxay si fiican u koraan "kor maraan", oo ku xidhan xabbad. Substrate for Tillandsia waa in loo doortaa dabacsan, jilicsan, oo si wanaagsan loo suuliyo biyaha iyo hawada. Waxaad isticmaali kartaa isku dar ah oo ka kooban geed, qoryo ama dhoobo jilicsan, shimbir, dhul caleen, peat, sphagnum iyo ciid. Intaa waxaa dheer, waxaa lagula talinayaa in lagu daro isku dar ah qeybaha rhizome iyo rhizomes dhuxusha. Si adag u hagaajin geedka substrate, tan iyo xididdadiisa ay daciif yihiin.
Waraabinta. Tillandsia waxay u baahan tahay waraabin dhexdhexaad ah sanadka oo dhan. Isticmaal biyo jilicsan, oo dooro biyaha roobka. Maalmaha kulul, waa la oggol yahay in la buuxiyo caleemaha biyo, lakiin kiiskuna ma aha in dammaanadda loo oggolaado in uu istaago. Si aad tan u samayso, isticmaal biyo jilicsan, kuleyliya heerkulka qolka.
Qoyaanka hawada. Tillandsia waa warshad dooraysa qoyaan badan hawada - 70-75%. Si loo abuuro shuruudo wanaagsan, ku buufin dhirta leh biyo qandac ah. Ku hanuuni nidaamka soo socda: marka hawada qallalan ee xagaaga - 1-2 jeer maalintii, celceliska qoyaanka - 1 jeer toddobaadkii, oo qoyaan badan - 1 jeer bishiiba. Inta lagu jiro samaynta burooyinkeeda iyo ubax, buufinta waxaa lagu sameeyaa taxaddar aad u daran, maaha inay u oggolaato biyaha inay galaan ubaxa. Haddii dhirta ay ku koraan qol leh hawo qalalan oo badan, ka dibna waxaa lagu talinayaa in qiyaastii 2 asbuuc kasta, marka lagu daro buufinta, abaabulo hannaanka biyaha ee Tillandsia: gabi ahaanba geedka qoyaan diiran. Haddii ay dhacdo waa daawo ku dhejisid dabagal, ku dhex daadi biyaha iyo weelka.
Dharka ugu sareeya. Tillandsia waxaa la quudin jiray Bacriminta ubax, rusheeyo caleemaha. Sameey sanadkan oo dhan, 3-4 asbuuc kasta. Xasuusnow in bacriminta waa in lagu qasi karaa ugu yaraan 2 jeer marka la barbar dhigo faahfaahinta lagu sheegay tilmaamaha.
Dib u dhigid. U faafi warshadahan gudaha ah caleemaha dhinaca, ama ilmaha. Waxaa la sameeyaa ka dib markii ubax iyo marka hooyadu xirto. Waa muhiim in aan waxyeeleynin geedka hooyada oo u keeno gabadh caafimaad leh. Raadi caleemo ku habboon geedka qaangaarka ah, isaga kala saar. Kala saar dhirta hooyada waa inay noqotaa marka caleemaha ay koraan 4-6 caleemo iyo xididada macquulka ah ayaa soo baxaya. Haddii aad isku mar tihiin mindi, waa inaad ku rushaysaa dhamaan qaybaha dhuxul la jajabiyay. Waxaa lagu talinayaa in lagu beero caleemo gooni ah. Inta lagu jiro xidid of caleemaha, hayso heerkulka 22-250C. Dhirta yaryar uma dulqaadan karaan iftiinka qorraxda si toos ah, markaa waa in la gooyaa. Usbuucyada ugu horeeya waa in lagu hayaa substrate heer dhexdhexaad ah. Dhirta yaryar waxaa loo wareejiyaa nidaamka daryeelka dadka waaweyn ee aan ka badneyn 1.5 bilood ka dib. The ubax ugu horeysay - ee 1.5-2 sano.
Transplantation. Dhirta Mature, iibsatay dukaanka leh jirid ubaxa, ma u baahan tahay xubin, tan iyo xilligii ubax, dhirta hooyada foomka farcan iyo halligto. Tillandsia noocan oo kale ah waa in isla markiiba la dhigo meel joogto ah oo aan u adkeysan ilaa dhamaadka ubax.
Tillandsiya ayaa si aan caadi ahayn u saameeya cudurada iyo cayayaanka. Laakiin xasillooni-darradani maaha mid kufilan waxayna kuxirantahay noocyada gaarka ah. Haddii dhibco madow ay ka muuqdaan subaxda caleemaha, dhirta waxaa ku yaalla gaasha gaari. Gaashaanlaha cayayaankan ayaa la arki karaa indhaha qaawan. Si aad uga takhalustid nacaybka, waxaad u baahan tahay in si farsamo ah looga saaro cayayaanka leh ulaha alwaax ama balaastig ah, iyada oo aan waxyeello dusha sare ee xaashida. Marka xigta, caleemaha waa in si fiican loo dhaqo biyo saabuun leh.
Calaamadaha fangaska iyo cudurrada fayrasku waa korodhka hufnaanta caleenka caleen iyo sameynta dhibco mug leh. Xaaladdan oo kale, waxaad u baahan tahay inaad ka saarto dhammaan caleemaha bukaanka ah iyo inta badan qolalka hawo qaadaan.
Kuwa ugu nugul cudurada kala duwan waa dhirta ay ku jiraan beerashada cufan, halkaasoo ay dareemaan iftiin iyo iftiin la'aan.
Haddii dhererka caleemaha ay bilaabaan in ay qallalaan lakabana ku dhejiyaan godka, ka dibna geedka waxaa ka maqan qoyaan ama qoyaan aad u hooseeya.
Haddii tallandsia caleemo baxo, macnaheedu waxa weeye in ay ka timaaddo qallajis daran. Iyo haddii ay ka badan yihiin warshad geedka kallana iyo u dhintaan.
Marka uu jiro iftiin la'aan, caleemaha Tillandsia waxay lumin karaan qurxinta, ubaxu waxay soo gashaa midabka caleenta cagaarka ah, dhirta ayaa si liidata u kobcaysa ugxan.
Sidee loo joojiyaa ubaxyada muddo dheer?
Sida loo koro a violet
Sida loo keydiyo nalalka gladioli
Warshad Croton gudaha: daryeelka, jirooyinka
Ubaxyo aan caadi ahayn ee dheryaha guriga
Daryeelka ubaxyada fuchsia
Warshad gudaha ah oo xasaasi ah
Tomato-strawberry gazpacho (maraq qabow)
Bézé leh cadaadis iyo raspberries
Polisensornye SPA: waxaan isticmaalnaa dhammaan dareennada
Xusuustii Dmitry Marianov: sheekooyinka noloshiisa oo ka mid ah jilayaasha, kuwaas oo midkoodna ogaa
Cunto-qabatooyin caafimaad leh oo caan ah
Fasaxa xagaaga ugu wanaagsan ee badda dibedda
Til Schweiger - jilaa caan ah iyo jecel dumarka badan
Khaladaadka aasaasiga ah ee bilowga xiriirka
Waxaan doonayaa in aan wax walba barto iyo qof walba, sababta?
Xiddiga 90 jirka ee Evgeny Osin ayaa isbitaal la dhigay isagoo ku jira xaalad culus
Maalinta Jacaylka 2016: waxa la siinayo, hambalyo asalka ah ee aayadda iyo qadarin
Waa maxay waxyaabaha aan xiranayo sannadkan?
Faa'iidooyinka biyaha badda milixda loogu talagalay dadka
Keega shukulaatada kirismaska ​​leh miraha poppy
Aad u faraxsan nin